Ukuphupha ngovelwano Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
uvelwano Ngokwesiqhelo ligama elisuka kumaxesha anzima. Ekupheleni komngcwabo, xa sixhawula izandla okanye sibanga abo sibathandayo benxibe ukuzila, sithi "Uvelwano lwam" kwaye ubalekele kwesi sivakalisi singenanto kuba akukho magama anokunyanzela ilahleko. Abo bafumana amazwi ovelwano bazilile, el mundo kubonakala ngathi yindawo emnyama nje, uvuyo novuyo zikude. Ubanjwe ziinkumbulo zothandekayo ongasokuze aphinde athethe nawe.
Nangona kunjalo, ukuvakalisa amazwi ovelwano inokuba sisenzo esinganyanisekanga, esichazwe ngabantu abangasondelanga kuwe, ewe, abanokungakuthandi.
Ngamanye amaxesha intetho "Uvelwano lwam" Ikwasetyenziswa ngengqondo yokomfuziselo okanye yokuhlekisa, umzekelo xa sijamelene nomsebenzi esingawuthandiyo.
1 Uphawu lwephupha «uvelwano» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uvelwano» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uvelwano» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uvelwano» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuze utolike ngokuchanekileyo lo mfuziselo wephupha, kubaluleke kakhulu ukuba umphuphi afumane amazwi ovelwano okanye avakalise amazwi ovelwano kuye.
Abo balila ephupheni bahlala kunye ilahleko Ngapha koko, akayithandi into yokucinga ngokuvuka kobomi, okwangoku okwakungekenziwa.
Kwiimeko ezinqabileyo kunjalo ukufa yokwenyani, kodwa endaweni yoko ukusuka kude neengcinga ezindala okanye zangaphambili. Ubudlelwane ukwamkela. Mhlawumbi wenza enye ngoku utshintsho kwaye kufuneka uyeke okudala ngaphambi kokuba uzinikele ngokupheleleyo kokutsha.
Ukuba ngoku bavakalisa amazwi ovelwano kuwe ephupheni lakho, oku kubonisa ngokucacileyo inkqubo yeentlungu kuwe, nokuba kungenxa yokuba uyatshintsha okanye kuba, ubuncinci, uzive ngendlela elungileyo. imeko enzima Zibekwe. Ukuba ubona iimpahla zokuzila kuwe, zama ukucela uncedo ebomini bokuvuka.
Ukuba uvakalisa amazwi ovelwano ngokwakho, ukutolikwa kwephupha kuxhomekeke ekubeni ngubani omthumelela amazwi ovelwano. Ngokubanzi, ukuvakalisa amazwi ovelwano yintsomi yamaphupha okuba neyakho Uncedo Abantu oqhelene nabo okanye emsebenzini ubuza oku kulandelayo: kukho umntu okudingayo.
Ukuba malunga nomntu othile ephupheni lakho, mhlawumbi iimpawu ezimbalwa ezincinci eziye zaqokelelwa zikhokelele kwinto yokuba uyayibona inkxwaleko yalo mntu. Zive ukhululekile ukunikela ngoncedo lwakho kwaye ube lapho kuye.
Uphawu lwephupha «uvelwano» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo, iintlungu ephupheni zihlala zithetha oko Yekela ihambeukwenza ithuba lokuvumela izinto ezintsha zingene ebomini bakho. Ukuvalelisa kwimikhwa yakho kunokuba buhlungu kakhulu kwaye kudle ixesha.
Kubaluleke ngakumbi ukuba abahlobo kunye nabahlobo basiqonde kwimeko enjalo kwaye bangakuthi basithuthuzele. Kukwasebenza kwanjalo xa ukwimeko enzima ebomini kwaye usokola nobunzima obukhulu ngaphakathi nangaphandle.
Ukuba ngalo mzuzu uphupha amazwi ovelwano, kuya kufuneka uyonwabele ngononophelo. Ziluphawu lokuba ungomnye umntu okanye abantu abaninzi abakungqongileyo. Andiziva ndiqondwa. Abanye babonakala benomdla kwikamva lakho, ngelixa enyanisweni bengenandaba nawe. Uyakubona oku kuhanahanisa kwaye ukuqhubekekise ephupheni ngoncedo lweli phawu liphupha.
Uphawu lwephupha «uvelwano» - ukutolika kokomoya
Ngokwembono yokomoya, amazwi ovelwano amele iintlungu kwaye ngenxa yoko ugxothiwe zakudala. Kungalo msebenzi wokulila kuphela apho umoya unokukhululeka kwaye ubandakanyeke kwizinto ezintsha. Ukuba uphupha abantu abathile kwiphupha lovelwano, inokuba imikhondo yabantu bexesha elizayo Abacebisi Mthetho.